Xoogaga Mucaarad ah oo la wareegay Xarumihii Dowlada Yemen ee magaalada Cadan. – Xeernews24
Xoogaga Mucaarad ah oo la wareegay Xarumihii Dowlada Yemen ee magaalada Cadan.
29. Januar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Xooggag mucaarad ah oo ka soo horjeeda dowlada dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa la wareegay xarumihii dowlada ee magaalada Sanca kadib markii dagaal la galeen ciidamo daacad u ah Madaxweyne Hadi.
Magaalada Cadan ayaa waxa ay xarun kumeel gaadh ah u tahay dowlada Hadi halka ay mucaaradka Xuutiyiinta ay maamulaan magaalada caasimada ah ee Sanca.
Hase yeeshee Ra’iisul Wasaaraha Yemen Dagher ayaa ugu baaqay dowlada Imaaraadka Carabta inay tallaabo qaato isagoo ka digey in dagaalka ka qarxay Koofurta Yemen uu faa’iido u yahay Xuutiyiinta. Madaxweyne Hadi oo saldhigiisu yahay Sacudi Carabiya ayaa ku baaqay xabad joojin aan weli hirgelin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/08/War-deg-deg.png 170 297 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-29 01:32:102018-01-29 01:32:10Xoogaga Mucaarad ah oo la wareegay Xarumihii Dowlada Yemen ee magaalada Cadan.
DAAWO Hordhaca Shirkii Abid ugu balaadhnaa ee lagaga soo horjeedo Madaxwaynaha... Dhacdo yaable Baraf iyo Qaboow lagu arkay dalka Sacuudiga